I-Airbus: I-39,000 yeenqwelomoya ezintsha, i-550,000 yabaqhubi abatsha abafunekayo ngo-2040
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Airbus: I-39,000 yeenqwelomoya ezintsha, i-550,000 yabaqhubi abatsha abafunekayo ngo-2040
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuthatha umhlala-phantsi kweenqwelomoya ezindala ukuba zikhawulezise, ​​zifuna ngokuqhubekayo ngakumbi ziqhutywa kukutshintshwa, ukuxhasa iinjongo zeshishini lokususa ikhabhoni.
Imfuno yothutho lomoya iya kuqhubeka ikhula, iqhutywe yi-GDP, ukunyuka kweklasi ephakathi kunye nomnqweno wokuhlola nokudibanisa.
Uphuculo oluqhubekekayo ekusebenzeni kakuhle kwezithuthi, izibaso ezizinzileyo, ukusebenza kunye nobuchwepheshe bokuqhubela phambili kuya kwenza ukuba injongo yecandelo le-2050 ingabiziyo.
Kufuneka ngaphezulu kwe-550,000 yabaqhubi abatsha kunye nama-710,000 amagcisa anezakhono eziphezulu kule minyaka ingama-20 izayo.
Kwiminyaka engama-20 ezayo, Airbus Uqikelelo lwemfuno yothutho lomoya ukusuka ekukhuleni kweenqwelomoya ukuya kumhlala-phantsi okhawulezileyo wenqwelomoya endala, engawongi amafutha ngamafutha, okukhokelela kwisidingo senqwelomoya yabakhweli kunye nezithuthi ezithuthwayo ezingama-39,000, ezili-15,250 kwezi zokutshintshwa. Ngenxa yoko, ngo-2040 uninzi lweenqwelomoya ezisebenzayo ziya kuba zezesizukulwana samva nje, ukusuka kwi-13% namhlanje, iphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kwe-CO2 kwiinqwelo zeenqwelomoya zehlabathi. Iingenelo zoqoqosho lokuhamba ngeenqwelomoya zanabela ngaphaya kwecandelo, zinegalelo elimalunga ne-4% kwi-GDP yonyaka yehlabathi kunye nokugcina imisebenzi emalunga nezigidi ezingama-90 kwihlabathi liphela.
Ngelixa iphulukene phantse neminyaka emibini yokukhula ngexesha le-COVID, ukugcwala kwabakhweli kubonakalise ukomelela kwayo kwaye kumiselwe ukuphinda kuqhagamshele ukukhula konyaka nge-3.9% ngonyaka, kuqhutywa kukukhula koqoqosho kunye norhwebo kwihlabathi liphela kubandakanya ukhenketho. Abantu abakumgangatho ophakathi, abona babona ngathi banokubhabha, baya kukhula ngenani ngeebhiliyoni ezimbini zabantu ukuya kwi-63% yabemi behlabathi. Ukukhula ngokukhawuleza kwezithuthi kuya kuba se-Asiya kunye ne-China yasekhaya ibe yeyona ntengiso inkulu.
Imfuno yenqwelomoya entsha iya kubandakanya malunga ne-29,700 yeenqwelomoya ezincinci ezifana ne-A220 kunye ne-A320 yosapho, kunye malunga ne-5,300 kudidi lwenqwelomoya oluPhakathi olufana ne-A321XLR kunye ne-A330neo. Kwicandelo elikhulu, eligutyungelwe yi-A350, imfuneko yokuhanjiswa kwempahla emalunga nama-4,000 ilindeleke ngo-2040.
Imfuno yemithwalo, inyuswe yi-e-commerce, iqhutywa kukukhula okulindelekileyo kwimpahla ecacileyo ye-4.7% ngonyaka kunye nomthwalo oqhelekileyo (omele malunga ne-75% yemarike) ukukhula kwe-2.7%. Lilonke, kule minyaka ingama-20 izayo kuya kufuneka abakhweli bempahla abamalunga nama-2,440, apho abangama-880 baya kuba besanda kwakhiwa.
Ngokuhambelana nokukhula, ukusebenza kweenqwelo-moya okuthe gqolo ukusebenza ngokufanelekileyo kwihlabathi jikelele kwandisa imfuno yeenkonzo zophapho zorhwebo - kubandakanywa ukugcinwa, uqeqesho, uphuculo, ukusebenza kwenqwelomoya, ukudilizwa kunye nokuhlaziya. Oku kukhula kusendleleni Airbus' Amanqanaba oqikelelo lwaphambi kobhubhane afikelela kwixabiso elongezelekayo elimalunga ne-$4.8Tn kwiminyaka engama-20 ezayo. Ngelixa uqhubeka nokuhla okunxulumene ne-COVID malunga nama-20% kwixesha lika-2020-2025, imakethi yeenkonzo iyaphindaphindeka, ibangela imfuno yabaqhubi abatsha abangama-550,000+ kunye nama-710,000+ amagcisa anezakhono eziphezulu kule minyaka ingama-20 izayo. Ngelixa ulondolozo luya kuhlala luluhlu lweenkonzo ezikhokelayo, indiza, ukusebenza komhlaba kunye neenkonzo ezizinzileyo nazo kulindeleke ukuba zikhule kakhulu.
“Njengoko uqoqosho kunye nothutho lomoya lukhula, sibona imfuno iqhutywa kukutshintsha endaweni yokukhula. Ukutshintshwa ngoyena mqhubi ubalulekileyo wanamhlanje we-decarbonization. Ihlabathi lilindele ukubhabha okuzinzileyo kwaye oku kuya kwenzeka kwixeshana elifutshane ngokuziswa kweenqwelomoya ezininzi zale mihla,” utshilo uChristian Scherer, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kunye neNtloko yeSebe. Airbus Amazwe ngamazwe. “Ukunika amandla ezi nqwelomoya zintsha, zisebenza kakuhle ngeSustainable Aviation Fuels (SAF) yeyona nto inkulu elandelayo. Siyazingca ngokuba zonke iinqwelomoya zethu - i-A220, i-A320neo Family, i-A330neo kunye ne-A350 - sele ziqinisekisiwe ukuba zibhabha kunye nomxube we-50% ye-SAF, imiselwe ukunyuka ukuya kwi-100% ngo-2030 - ngaphambi kokwenza i-ZEROe ibe yinyani yethu elandelayo ukusuka ngo-2035 phambili.”
Ishishini le-Aviation ye-Aviation yehlabathi sele ifumene inzuzo enkulu yokusebenza kakuhle, njengoko kuboniswe ngokuncipha kwe-53% kukukhutshwa kwe-CO2 ye-aviation yehlabathi ukususela ngo-1990. Uluhlu lwemveliso ye-Airbus isekela ubuncinane i-20% ye-CO2 yokufumana ukusebenza kakuhle kwinqwelomoya yesizukulwana sangaphambili. Ngokujonga izinto ezintsha eziqhubekayo, uphuhliso lwemveliso, uphuculo lokusebenza kunye nokhetho olusekwe kwimarike, Airbus ixhasa icandelo lezothutho lomoya ekujoliswe kulo lokufikelela kwi-net-zero carbon ekhutshwayo ngowama-2050.